Njengoba sazi sonke, abaningi Japanese siphilele baguge kakhulu. Futhi yiziphi izinto ziye zaba nomthelela lokhu nempilo ende Kunzima ukusho. Bathi lokhu akukhona indima yokugcina idlalwa ngu ukusetshenziswa ukudla Japanese wasabi. Mayelana nalesi isinongo yaziwa abaningi, abaningi bazama, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi wasabi - a horseradish Japanese, hhayi lwesinaphi. Futhi, horseradish Japanese futhi izitshalo bethu bendabuko zihluke kakhulu, futhi nakuba bobabili emndenini iklabishi.
Ezitolo wasabi horseradish okuthengiswa ikakhulukazi ngesimo unama oluhlaza. Ivame babambeke izitsha Japanese ezifana sushi futhi sashimi. Kodwa kuhle ukuthi uzinake wena ukuthi spice wasabi nezinye izitsha Japanese. Injongo eyinhloko okuyiwona lokhu isinongo sengezwe - Spice kube izitsha kancane deflating Japanese.
Iningi wasabi, okuyinto amanga emashalofini, etshalwa emapulazini ezimweni yokufakelwa emazweni anjenge eCanada, e-United States, i-Taiwan, Australia, eChina kanye nabanye. Lokhu kwanda ukunambitheka engadini horseradish e ukugqama kakhulu kunabayeni zasendle uzakwabo Japanese. wasabi Real - umuntu owakhulela Japan endaweni sezintaba, phezu lomfula ngamanzi ahlanzekile. Kodwa ukuthola horseradish yangempela Japanese kunzima kakhulu, ngakho isidingo lo mkhiqizo ezakha eyayenziwe.
Futhi uma othile wakwazi ukuthola impande horseradish Japanese, yena ngokwakhe uzokwazi ukupheka kusuka isinongo yakhe. Lokhu kwenziwa impela nje. Kuyadingeka ukuthatha wasabi, ukuyihlanza, deda ichopho phezulu ngesikhathi grater emihle kakhulu, kuyilapho okwenza a motion isiyingi. Kodwa kusukela empandeni wasabi - umkhiqizo iyindlala, bese lokhu isinongo uvame wenza kusukela powder.
Powder wasabi nokunamathisela ilungiselela kulula ngisho kuka kusukela empandeni. Ukuze wenze lokhu kuthatha ingilazi, uwubeke ithisipuni powder, bese ufaka umthamo ofanayo amanzi afudumele, ivuse konke ngokushesha. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka nokunamathisela awugqinsi, ukuvumelana sifana nobumba. I ingilazi kufanele nabokhulumile ipuleti flat. Ngakho-ke kufanele ume imizuzu engaba ngu-10. Lokhu kwenziwa ukuze namathisela kancane loma yazuza ukunambitheka bazwakale. Futhi, ngoba ukunambitheka powder kungenziwa wanezela soy sauce. Ngakho, bakhonze eyodwa wasabi unama. Kusinda kancane, kodwa ukuze alungiselele isinongo lekusasa akuyona zinkulu. Kungcono ukukwenza kakhulu ngendlela ungakwazi uqede ngesikhathi esisodwa. wasabi powder kalula ithengwe at ezitolo okukhethekile noma eminyangweni, onguchwepheshe cuisine Japanese. Ikakhulukazi kusukela wagcina kahle. Kunikezwe lokhu spice kunoma isidlo inhlanzi, inyama, imifino nelayisi. Libuye engacabangeki ngaphandle izitsha ezifana sushi kanye imiqulu.
Wasabi - akuyona kuphela esihlwabusayo isinongo okubabayo. horseradish Japanese amakhulu eminyaka kucatshangwa ukuthi ikhambi lale ukudla okunobuthi ukuthi manje okuye kungase kutholakale ososayensi. Futhi wasabi has kancane isisu umphumela futhi anezakhi isinqandakuvunda futhi fungicidal. Enye horseradish Japanese kuyinto ecebile Antioxidants ungumthombo polyphenol. Lezi zinto zehlela iwukudambisa ithonya ka radicals khulula ku umzimba. Wasabi Kunconywa ukusebenzisa ukulibopha okudambisa myalgia, neuralgia nesifo sokuqaqamba kwamalunga. Kodwa njengoba horseradish Japanese kuvusa uketshezi of juice esiswini, it is hhayi Kunconywa izifo esiswini.
Kungani kubalulekile ukwazi ukuthi zingaki amagremu e isipuni ushukela?
Kungenzeka yini ukuba zidonse isitoreji uju?
"Cefepime": bomcondvofana kanye analogue zomuthi
CSC - Iyini? CSC Izintela
Dream Ukuhunyushwa: upende izindebe - yini eyayingenziwa leliphupho?
Kanjani ukuze ubhale umbhalo ukuhlikihla
Nezingubo Isitolo esidayisa yonke impahla kanye nenzuzo yayo
Ubhontshisi - ngamaphrotheni noma carbohydrate? isakhiwo